Asus ROG G703GX-EV209T Gaming Black (i7-8th Gen)-9 ~ ICT.com.mm
HomeAsus ROG G703GX-EV209T Gaming Black (i7-8th Gen)-9
Asus ROG G703GX-EV209T Gaming Black (i7-8th Gen)-9
Intel Core i7-8750H, 2.20 GHz DDR4 3200 8GB, 1 Slot Free Up to 32GB 512GB SSD, HDD 1TB NVIDIA RTX2080 8GB GDDR6 VRAM 17.3″Full HD (1920 x 1080) 144Hz, 3ms, IPS-Level Panel... [Learn more]
Brand: ASUSSKU: 134086N/ASee more: ASUS, Computer Systems, Gaming, Laptops / Notebooks, New Arrivals, Products, ShopFilter by: Gaming Laptops, USD
Intel Core i7-8750H, 2.20 GHz
DDR4 3200 8GB, 1 Slot Free Up to 32GB
512GB SSD, HDD 1TB
NVIDIA RTX2080 8GB GDDR6 VRAM
17.3″Full HD (1920 x 1080) 144Hz, 3ms, IPS-Level Panel
Intel (802.11AC) Gigabit Wifi, BT 5.0
Gamers တွေကိုအကြိုက်တွေ့စေမယ့် Asus ရဲ့ ROG Gaming Notebook လေးဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဒီ ဇိုင်းပုံစံနဲ့ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး တွေ့မြင့်လိုက်တာနဲ့စွဲမက်သွားစေမယ့် ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Notebook မှာ Intel Core i7-8750H, 2.20 GHz 8th Generation Processor ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Graphic ပိုင်းအ တွက် NVIDIA RTX2080 8GB GDDR6 VRAM အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပေးထားတာကြောင့် Gaming Desktop မှာရရှိနိုင်တဲ့ Performance မျိုးကို ဒီ Notedbook မှာရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 8GB DDR4 RAM ပါရှိသလို RAM ကို 32GB အထိတိုးမြှင့်အသုံးပြုလိုတယ်ဆိုရင်လည်း အသုံးပြုလို့ရမှာပါ။ 512GB SSD, HDD 1TB တို့ကိုအသုံး ပြုပေးထားတဲ့အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မြန်ဆန်သွက်လက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုနေစဉ်မှာ Notebook ကနေ အပူထုတ်လွှတ်ခြင်းကို အတက်နိုင်ဆုံးလျော့ချပေးဖို့ Dual-Fan ပါရှိတဲ့ Advanced Cooling နည်းပညာကိုပါ အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Keyboard အတွက်ကိုလည်း HyperStrike Extreme Technology ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး AURA SYNC RGB Gaming Keyboard ကိုတပ်ဆင်အသုံးပြု ပေးထားလို့ Call of Duty, Need for Speed, Counter Strike နဲ့ Dota2တို့လို Performance ကောင်းတဲ့ Games တွေကို အဆင်ပြေစွာ ဆော့ကစားနိုင်မှာပါ။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက (17.3) လက်မရှိပြီး Full HD Display ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Windows 10 Built-in ပါရှိတာကြောင့် Latest Software တွေကို အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုလို့ရပါလိမ့်မယ်။ Connectivity ပိုင်းအတွက် Intel (802.11AC) Gigabit Wifi, Bluetooth 5.0, USB ports များ၊ HDMI, Mini DP, LAN Port, Audio Jack, Microphone Jack, SD Card Reader စတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အသံထွက်ပိုင်းအတွက် Quad-speaker sound system ကို အသုံးပြု ပေးထားပြီး Sonic Studio III 7.1 Channel surround sound စနစ်ဖြစ်တာမို့ ကြည်လင်ပြတ်သားကောင်းမွန် တဲ့ အသံထွက်စနစ်နဲ့ အပန်းဖြေဆော့ကစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလေးချိန်ကလည်း (2) kg သာရှိတာမို့ အလေးချိန် ပေါ့ပါးတဲ့ Gaming Notebook တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ (2) years warranty ပေးထားပြီး Original Asus Gaming Backpack ပါရှိပါတယ်။
The ROG G703GX is equipped with an Intel 9th generation processor and full-powered NVIDIA GeForce RTX graphics for amazing desktop-level experiences. The G703GX packsa17.3-inch 144Hz high refresh-rate display, patented ADC (Anti-Dust Cooling) technology, andaHyper Drive high-speed SSD. The ROG G703GX is built with the gamer in mind. It is, from the inside out, the ultimate armored fighter.
The ROG G703 features an ultra-responsive 17.3-inch Full HD IPS-level display witha144Hz refresh rate. It’s powereda9th Generation Intel Core processor with overclocked GeForce RTX 2080 graphics for the utmost power inaportable form factor.
NVIDIA GeForce RTX delivers the ultimate PC gaming experience. RTX graphics cards bring together real-time ray tracing, artificial intelligence, and programmable shading. This isawhole new way to experience gaming.
This item: Asus ROG G703GX-EV209T Gaming Black (i7-8th Gen)-9 K3,646,480